Lamaaneyaasha Wanaagsan Iyo Waxyaabaha Ay Ku Hormariyaan Guurkooda - Aayaha
Runta ayaa ah in guurka guuleysta uu ku dhisanyahay isu-tanaasul ay sameeyaan labada lamaane ama haddii kale uu guurkaas guuldareysanayo. Waxaan baarnay xaqiiqda ah in lamaaneyaasha uu guurkoodu caafimaadka qabo ay yaqaanaan sida loo wada shaqeeyo koox ahaan.
Guurku ma ahan guuleysi
Way fududahay inaad weyso aragtida ah “anaga” ee guurkaaga ama aad kala tagtaan. Waa inaadan isku dayin inaad ku guuleysato muran kasta. Waxa ugu wanaagsan ee la sameeyo ayaa ah helitaanka xal.
Haddii aad diiradda saareyso in wax waliba ay noqdaan sidaad u rabto halkii aad xalin lahayd arrinta, waxaad ku guuldareysatay inaad aragto dhibaatada dhabta ah.
Waxaad bilaawdeen in midba kan kale uu ka caroodo. Qofna kuma guuleysan guurka haddii labadiinaba aad sariirta tagtaan ama seexataan adinkoo careysan. Hadafka guud ee ugu muhiimsan isla markaana ugu wanaagsan ee quseeya arrimhiina ayaa ah inaad wadajir ah xal u gaartaan.
Xiriir mar kasta
Sheeyga koowaad ee la-taliyaha guurka markaad u tagto uu intabadan kuu sheegi doono ayaa ah isgaadhsiinta. Waa inaad barataa sida ugu wanaagsan ee aad kula xiriiri karto xaaskaaga/seygaaga.
Waxay noqon kartaa inaad kala hadasho nolol maalmeedkiina ama micnaha nolosha lafteeda. Ka hadlidda wax kasta oo yaryar ayaa xoojiya ama awood u yeela lamaanaha.
Waa inaad taqaan sida la isugu yimaado dhammaan dhinacyada nolosha. Waa inaad mar kasta dhageysataa marka uu kan kale hadlaayo. Si run ah u dhageyso ereyada hadalkiisa.
Sida loo tanaasulo
Dhammaan lamaanaha sheeyga ugu muhiimsan ee laga rabo ayaa ah inay isu-tanaasulaan. Waa inaad yeelataa dabeecad xal aad ku sameyso. Isweydii dhowr su’aalood. Isweydii haddii aad qiimeyso kala duwanaanshihiina. Hubi inaad fahamto inay wanaagsantahay haddii aadan mar walbo saxneyn.
Hubi inaad mararka qaar meel iska dhigto baahiyahaaga si aad ula kulanto baahiyaha seygaaga/xaaskaaga.
Ugu dambeyn, go’aan ka gaar haddii aad kala hadli karto kala aragti duwanaantiina si ay ku dheehantahay jacayl iyo ixtiraam.